Sina 5 sosona A3 fanapahana mat, 661A3, fanasitranana tena famonoana tsihy fanamboarana sy ny orinasa | Allwin
5 sosona A3 manapaka Mat, 661A3, Matetika manapaka tena
Sfanasitranana elf A3 orinasa fametahana mat mivantana
Farafara fanapahana fanasitranana tena, arovy ny haavon'ny latabatra fiasanao. Ny velaran-tsihy dia malefaka PVC, aza manimba ny volo fanapahana, mateza kokoa ny lelanao. Azonao atao ny mampiasa an'io tsihy io ho toy ny mpiaro amin'ny birao na birao fanapahana DIY ao amin'ny efitranonao, trano, sekoly na birao.
5-layer PVC material, White hardness PVC eo afovoany, misoroka ny fanapahana rehefa tapaka ny herinaratra. Miasa tsara amin'ny fanapahana adidy mavesatra, mifanaraka amin'ny mpikapa rotary sy ny lelany mahitsy. Ny mason'ny fanapahana marika dia mainty eo afovoany, izay tsy maharitra !
Fanapahana marina roa sosona, roa santimetatra ary metrotra ary zoro. Mat size: 18 x 12inches, Grid size: 17 x 11inches, hatevin'ny 3MM, zoro samihafa 30 ° 45 ° sy 90 °, mora vakiana.
Fanomezana tonga lafatra ho an'ny mpanao asa tanana sy ny fialamboly! Varotra mivantana mivantana an'ny orinasa matihanina, tsara kalitao ary vidiny. Natolotra ho an'ny mpanakanto, mpanao asa tanana, mpanao trano, quilter, mpanao sokitra ary fialamboly.
Afaka misafidy habe samihafa ianao arakaraka ny takiana aminao, A4 (12 x9 inch), A3 (18 X12inch), A2 (24 x18inch), A1 (36X24 inch), A0 (48X36 inch).
Item Model Model 661A3
Karazana firafitra ara-materialy 5 sosona, afovoany dia Hard PVC fotsy fototra
Item lanja 0,65kg isaky ny tapa
Vokatry ny vokatra 17,72 x 11,81 x 0,12 santimetatra / 45 x 30 x 0,3 cm
Size (Spec.) A3
Karazana fitaovana PVC
Loko mahazatra Green, manga, Pink, Black, Red, Purple
Ny tsihy fanapahana tsara dia tokony hanana toetra manaraka farafaharatsiny;
1. Ny fitaovana akora dia tokony ho tsara mba hahafahan'izy ireo manasitrana mandeha ho azy aorian'ny fanapahana azy.
2. Ny sosona manapaka dia tsy maintsy matevina, mba hahafahan'ny elatra ampiasaina mandritra ny fotoana lava, ary ny tsihy fanapahana mihitsy dia manana androm-piainana lava.
Fikojakojana ny fandriana fanapahana;
Apetaho amin'ny faritra fisaka mahazatra; sorohy ny mari-pana avo na ny tara-masoandro mivantana; aza manasa amin'ny solvents simika.
Warranty & Fanohanana
Warranty momba ny vokatra: Tohano aorian'ny fivarotana vokatra 1 taona
Previous: 5 sosona A2 fanapahana tsihy, 661A2, fanasitranana tena tsihy fanapahana
Manaraka: 5 sosona A4 fanapahana tsihy, 661A4, famonoan-tena
5 sosona A1 manapaka Mat, 661A1, Manasitrana tena Cu ...
5 sosona A2 manapaka Mat, 661A2, Manasitrana tena Cu ...
3 sosona A4 manapaka Mat, 883A4, Manasitrana tena Cu ...